Hiob 41 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn kaa Lewiatan a ne ho yɛ nwonwa no ho asɛm (1-34)
41 “Wubetumi de darewa ayi Lewiatan?*+Anaa wubetumi de hama akyekyere ne tɛkrɛma? 2 Wubetumi de hama* ahyɛ ne hwene mu?Anaa wubetumi de darewa* aso n’apantan? 3 Wohwɛ a, anka ɔbɛpa wo kyɛw?Anaa ɔbɛyɛ n’ano brɛbrɛ? 4 Ɔne wo bɛyɛ apamSɛ fa no yɛ akoa afebɔɔ? 5 Wo ne no bedi agoru sɛ anomaa?Anaa wode hama beso ne mu de no ama wo mma mmea? 6 Wohwɛ a, aguadifo de wɔn nneɛma bedi nsesa agye no? Anaa aguadifo bɛkyɛ no afa?* 7 Wubetumi de pɛmɛ* ahyehyɛ ne were mu?+Anaa wubetumi de mpeaw a wɔde yi mpataa awowɔ ne tirim? 8 Fa wo nsa ka no hwɛ;Wobɛkae ntɔkwaw no, na worenyɛ bio da! 9 Woyɛ w’adwene sɛ wubetumi akyere no a, woredaadaa wo ho. W’ani bɔ no so kɛkɛ mpo a, wobɛbɔ hu.* 10 Obiara nni hɔ a ɔbɛpɛ ne ho asɛm akogyigye no. Enti hena paa na obetumi agyina m’anim?+ 11 Hena na wadi kan ama me biribi a enti ɛsɛ sɛ mitua no ka?+ Nea ɛwɔ ɔsoro ase nyinaa yɛ me dea.+ 12 Merennyae ne nan no ho asɛm ka,Ne ne kɛseyɛ ne sɛnea wɔyɛɛ no ma ɛyɛɛ nwonwa no. 13 Hena na obetumi aworɔw ne ho were? Obue n’anom a, hena na obetumi awura mu? 14 Hena na obetumi abue n’anom* apon? Ne se a egu n’anom no yɛ hu. 15 Abona ahyehyɛ wɔ n’akyi;*Akeka atoto so denneennen. 16 Ɛfomfam so papee,Na mframa mpo ntumi mfa mu. 17 Ɛtetare so denneennen;Ɛfomfam so denneennen, na worentumi ntetew mu. 18 Ɔporow ne hwene mu a, ɛpa gya,Na n’ani te sɛ adekyee hann. 19 N’anom pa yerɛwyerɛw;Ɛtetew gya. 20 Wusiw fi ne hwene mu ba;Ɛte sɛ fononoo a wɔde sare asɔ gya wɔ mu. 21 Ne home ma gyabiriw sɔ kɔɔ,Na ogya pue fi n’anom ba. 22 Ahoɔden wɔ ne kɔn mu paa,Na wuhu no a, wobɛbɔ birim. 23 Ne nam tetare so denneennen.Ɛyɛ den te sɛ dade a wɔanan ama ada; wowae a, ɛnyɛ yiye. 24 Ne koma yɛ den te sɛ ɔbo,Yiw, ɛyɛ den te sɛ ɔbo a wɔyam so ade.* 25 Sɛ ɔma ne mu so a, akatakyi mpo bɔ hu;Sɛ ɔpete ne ho a, nkurɔfo adwene tu fra. 26 Sekan a wɔde bɛkɔ no so biara ntumi no,Na peaw ne bɛmma ne agyan biara nso ntumi no.+ 27 Dade yɛ sare ma no,Na kɔbere yɛ dua a awu ma no. 28 Agyan ntumi mpam no;Akorabo yɛ sare ma no. 29 Aporibaa yɛ sare ma no,Na sɛ ohu peaw a edi ahim a, ɔserew. 30 Ne yam te sɛ kuku a abubu a ano yɛ nnam;Ɔyantam atɛkyɛ mu a, ɛte sɛ awiporow ade.+ 31 Ɔma subun huru sɛ kuku a esi gya so;Ɔtɔ po mu a, epuw ahuru sɛ ngo a ɛrehuru wɔ kuku mu. 32 Ɔfa baabi a, na ɔkwan no so ahyerɛn. Anhwɛ a ɛbɛyɛ wo sɛ subun afuw dwen. 33 Biribiara ne no nsɛ wɔ asaase so;Sɛnea wɔyɛɛ no no, onsuro hwee. 34 Aboa biara a ɔyɛ ahantan no, ɔpɔkyere n’ani hwɛ no. Ɔno ne wuram mmoa a wɔn ho yɛ den nyinaa hene.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ “ɔdɛnkyɛm.”
^ Nt., “sare tenten.”
^ Nt., “nsɔe.”
^ Anaa “aguadifo besi no kosow?”
^ Ɛte sɛ peaw; wɔde yi mpataa akɛse.
^ Anaa “wubetwa ahwe.”
^ Nt., “n’anim.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Abona a ahyehyɛ wɔ ne ho no ma ɔyɛ ahantan.”
^ Anaa “owiyammo.”